brazing induction avo lenta - mpanamboatra milina fanamafisam-peo | vahaolana fanafanana fampidirana
fampiasana hafanam-be avoaka
Fanoroana fitaovana fanofanana amin'ny induction
Tanjona: Hanampy ny kônina sy ny vata ho fitaovana fanodinana
Fitaovana ampiasain'ny mpanjifa
Ny fandrefesana ny loko no mamaritra ny loko
Temperature 1300 - 1400 ºF (704 - 760 ° C)
Fitaovana: DW-UHF-6kw-I, 250-600-0.66 kHz rafitra fanamorana indostrialy, anisan'izany ny fampitaovana hafanana hafakely ampiasaina roa capacitors 1.32 μF (total XNUMX μF) .
Dingana: Ampahany roa no napetraka eo amin'ny kofehy tsirairay. Ny takelaka vita amin'ny braze dia napetraka eo amin'ny kôlônina eo amin'ilay fiarahamonina. Ny ampahany napetraka dia napetraka ao amin'ny kodiarana fanamafisam-peo ary atambatra mandra-pahafatin'ny lamosina.
Ny vokatra / tombony: famolavolana kodiarana mahomby dia ahafahana manalefaka ny ampahany roa amin'ny rafitra 2kW tokana. Ny dindo roa dia tanterahina ao anatin'ny dingana ilaina, hampitombo ny fitomboan'ny dingana
Sokajy Technologies Tags fitaovam-piadiana, Famolavolana fitaovana famolavolana amin'ny induction, fitaovam-piadiana, fampiasana hafanana hafanana, fampiasana hafanam-be avoaka, Fampidiran-drivotra fitaovana varahina, rf lozotra fitaovana